ပရိုတိန်းအစားအစာများ - သင်၏အစားအစာအတွက်တိရိစ္ဆာန်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရင်းအမြစ်များ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ပရိုတင်းဓာတ်များသည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်အခန်းကဏ္ play များစွာရှိသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုမှာအထူးသဖြင့်ပုံသဏ္stayာန်ဆက်ရှိလိုသူတို့တွင်ကြွက်သားကြီးထွားမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ဒါဟာကတည်းကလေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်ပရိုတိန်းယူဘုံဖြစ်ပါတယ် သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများအရ၎င်းတို့သည်ကြွက်သားပြုပြင်ခြင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ကြောင်းဖော်ပြသည်.
ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းသည်အတွင်းနှင့်အပြင်နှစ်မျိုးလုံးသိသာသည်။ အဝတ်အစားများသည်သင့်ကို ပို၍ သင့်တော်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၊ အရိုးနှင့်ကြွက်သားကျန်းမာရေးတို့တွင်အကျိုးရှိပြီးအချို့သောအကျိုးကျေးဇူးများမှာအနှစ် ၄၀ နောက်ပိုင်းတွင် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။
အကယ်၍ သင်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်လိုအပ်ပါကပရိုတိန်းဓာတ်ကကူညီနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာပြည့်ဝတဲ့ခံစားချက်ကိုရှည်စေလို့ပဲ။ တစ်နေ့လုံးပျံ့နှံ့သွားသည်။ ပရိုတင်းကြွယ်ဝသောအစားအစာများသည်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်, ကိုယ်အလေးချိန်မှလာသောအခါညှိနှိုင်းမဟုတ်သောလိုအပ်ချက်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အစားအစာများတွင်မူကြွက်သားထုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။
ဖြစ်နိုင်သည်။ အနောက်ကမ္ဘာမှလူအများစုတို့သည်သူတို့၏အစားအစာမှပရိုတင်းဓာတ်လုံလောက်စွာရရှိရန်ပြnoနာမရှိပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကီလိုဂရမ်တွင်တစ်နေ့လျှင် ၀.၈ ဂရမ်ပရိုတိန်းလိုအပ်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ အလွန်တက်ကြွသောအမျိုးသားများသို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်လိုသောသူများ၏ပမာဏသည် ၁.၄ ဂရမ်ခန့်တွင်တိုးပွားသည်။
အဲဒါကိုရယူရတာဟာရှုပ်ထွေးမှုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်အကြံပြုထားသောအကွာအဝေးအတွင်းနေ့စဉ်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုဖြင့်မျှတသောအစာကိုစားရန်လုံလောက်ပါသည်။။ ဘားနှင့်လှုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောပရိုတင်းထုတ်ကုန်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်သင်၏အစားအစာမှပရိုတင်းဓာတ်လုံလောက်စွာမရရှိပါကသင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။
ပရိုတိန်းများများလေလေ၊ ပိုကောင်းလေ၊ သို့သော်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်ဟုထင်မြင်လိုသည့်သဘောထားရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပိုလျှံမှုကိုဖယ်ရှားပေးသော်လည်း၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေပြီးကျောက်ကပ်ကိုပင်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
အသားတွင်ပရိုတိန်းဓာတ်ပါဝင်မှုသည်အလွန်မြင့်မားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည်သို့သော်တိရိစ္ဆာန်အစားအစာများကိုအလွဲသုံးခြင်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်အတွက်မကောင်းကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ယင်းတွင်ဒိန်ခဲ၊ ကြက်ဥ၊ ဒိန်ချဉ်နှင့်ငါးတို့ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်အနီရောင်အသားနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်သွေးလွှတ်ကြောများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းပြုပြင်ထားသောအသားများ (ဝက်အူချောင်းများကဲ့သို့) သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းသောအရာများဖြစ်သဖြင့်၎င်းတို့တွင်အရာများစွာပါဝင်သည်။
အသားနီ (အမဲသား၊ ဝက်သားနှင့်သိုးသငယ်) တွင်ပရိုတင်းများစွာရှိသည်ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များရှိသော်လည်း၎င်းကိုသေးငယ်သောပမာဏသို့မဟုတ်စားသုံးခြင်းမှပင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။
ဒိန်ချဉ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးပရိုတင်းဓာတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာကျန်သောနို့ထွက်ပစ္စည်းများ (ဒိန်ခဲ၊ နို့ ... ) ကဲ့သို့ပင်၊ အနိမ့်အဆီမျိုးကွဲကိုရွေးချယ်ပါ.
ငါးနှင့်ခရုခွံများသည်ပရိုတင်းဓာတ်များစွာရရှိနိုင်သည်။ တူနာသည်လူသိအများဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည် ဆော်လမွန်ငါးများ၊ ပုလဲများနှင့်ပုစွန်များကသင့်နေ့စဉ်ဆေးထိုးရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်.
သက်သတ်လွတ်များကလိုအပ်သောပရိုတိန်းများအားလုံးကိုဒီအဟာရအုပ်စုမှရယူနိုင်သည်ဟုဆိုသည်ကြက်ဥကဲ့သို့သောအသား (သို့) တိရိစ္ဆာန်မှထွက်သောအခြားအစားအစာများမလိုအပ်ဘဲ။
ပဲတွေဆီကနေပရိုတင်းတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ပဲပဲများကဲ့သို့သောပဲပင်များ (သီးတောင့်များ၊ နို့၊ tofu ... များ)၊ ပဲဟင်း၊
သင်ပရိုတိန်းကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအပြင်ဗာဒံသီးသည်သင်၏နှလုံးအတွက်လည်းကောင်းသည်။ မြေပဲ၊ pistachios နှင့် walnuts တို့ကိုလည်းစဉ်းစားပါ…သူတို့သည်ကယ်လိုရီများကြွယ်ဝသောကြောင့်အခွံမာသီးများဖြင့်အလွန်အကျွံမသုံးသင့်ပါ။
စီရီရယ်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်၏အစားအစာတွင် oats များထည့်ပါ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပရိုတိန်းကောင်းများသေချာစေပါလိမ့်မည်.
ဒီအစားအစာပတ်ပတ်လည်ကိုအထောက်အကူပြု အစားအစာ ၁၀၀ လျှင်ပရိုတင်း ၃ ဂရမ်။ ဒါ့အပြင်ကယ်လိုရီလည်းနည်းတယ်။ နောက်ထပ်စဉ်းစားရမည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သည်ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရိုတင်းဓာတ်များစွာရရှိသည်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းသည်အခြားအစေ့များဖြစ်သောဖရုံသီး၊ နေကြာစေ့သို့မဟုတ်ကွီနိုကဲ့သို့သောမျိုးစေ့များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ထိုက်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » ပရိုတိန်းအစားအစာများ